तातो अवस्थामा समीक्षा गरेनौं, अहिले हामी एकताबद्ध भयौं - Disanirdesh
तातो अवस्थामा समीक्षा गरेनौं, अहिले हामी एकताबद्ध भयौं
दिशा निर्देश ९ भाद्र २०७८, बुधबार ०८:३८ मा प्रकाशित (८ महिना अघि)
काठमाडौँ — माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले पार्टी विभाजन गरेपछि मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा मझधारमा रहेका नेताहरू पनि सहभागी भए । विगतमा माधव नेपालसँग नजिक रहेका उनीहरू अब अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै स्वीकारेर पार्टीभित्रै बस्ने भएका छन् । पार्टी एकताका लागि विगतमा गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै अघि जाने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । के अब एमालेको विवाद मिलेको हो ? यसै सन्दर्भमा एमाले सचिव गोकर्ण विष्टसँग गरेको कुराकानी :
लामो समयको अन्तरविरोधपछि तपाईंहरू स्थायी कमिटी बैठकमा जानुभयो, के–के सहमति भयो ?
लामो समयदेखि एमालेभित्र असामान्य र असहज परिस्थिति देखा परेको थियो । त्यसैले समाधानका लागि कार्यदल गठन भएको थियो । त्यसले दुईटा नेतासँग लामो परामर्श गरेर समस्या समाधानका लागि हामीले १० बुँदे सहमति प्रस्ताव गरेका थियौं । त्यो सहमति एमालेभित्रको एउटा शक्तिसंघर्षको रुपमा नै थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर एकताबद्ध हुन आवश्यक थियो । यद्यपि माधव नेपाल सहितका नेताहरू एकताबद्ध हुनसक्नु भएन । उहाँहरू नयाँ दल गठनको प्रक्रिया जानुभयो ।
यो अवस्थामा फेरि पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन कार्यादलको सिफारिसमा टेकेर त्यसको कार्यान्वयनमार्फत पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने सन्दर्भमा हामीले पहिलेदेखि नै अडान राख्दै आएका थियौं । हामीले पार्टी अध्यक्ष र महासचिवसँंग लामो समयदेखि छलफल गरेका थियौं । छलफलबाट १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने र एकता अघि बढाउने भन्ने निष्कर्षका आधारमा स्थायी कमिटिको बैठकले निर्णय गरेको हो । अब पार्टी एकताबद्ध हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
बुँदागत रुपमा बैठकका मुख्य निर्णय के हुन् ?
एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय १० बुँदाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कामहरू बारेमा नै छ । जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टी र जनसंगठनका सबै तहका कमिटीहरूलाई यथावत् रुपमा क्रियाशील गराउने, ती कमिटीका बैठकहरू राख्ने, असोज महिनाभित्र सदस्यता नवीकरणको समय तोकेर प्रक्रिया अघि बढाउने, जिल्ला भेलाहरूमार्फत कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने, विधान महाधिवेशन र पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको पनि मिति तय गर्ने काम भएको छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई एकताबद्ध बनाएर आपसी कामहरूमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ । पार्टीमा असहमत हुँदै नयाँ दल गठनको प्रक्रियामा जानु भएका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ लगायतका नेताहरूलाई एकतामा फर्कन आह्वान गरिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक १० गते १२ बजे बस्ने तय भएको छ ।
अब पार्टीभित्रको अन्तरविरोध समाधान भएको हो ?
एउटा जीवन्त पार्टीभित्र नयाँ मुद्दाहरू जन्मन सक्छन् । नयाँ अन्तरविरोध पैदा हुनसक्छ । विगतका अन्तरविरोधहरूका अवशेषहरू बाँकी पनि रहन सक्छन् । तर फेरि पनि सबै कुराको समाधान पार्टीभित्र प्रणालीद्वारा नै हुनुपर्छ । विगतमा विधिप्रणाली कमजोर भयो त्यसकारण पनि पार्टीभित्रका समस्याहरू विधिबाट हल गर्ने भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित हुन पुगे । अब पार्टीलाई जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा सञ्चालन गर्ने, विधिमा टेकेर हल खोज्ने प्रक्रिया अघि बढायौं भने समस्या समाधान हुन्छ । फेरि पनि अन्तरविरोध देखापर्दैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन । तर हरेक समस्याहरूको समाधान विधिद्वारा नै हल गरिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अघि बढ्नुपर्छ ।
यो चरणमा भएको अन्तरविरोध हल भएको हो ?
१० बुँदा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा ६ सदस्यीय कार्यादल गठन गरिएको छ । १० बुँदा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समस्या रहँदैन । तर जहाँ समस्या देखा पर्छन् भिम रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट रहेको कार्यादलले समस्या समाधानका लागि भूमिका खेल्नेछ ।
एमालेबाट विभाजित भएर माधव नेपाल नेतृत्वमा नयाँ पार्टी बनेको छ, त्यो पार्टीमा तपाईंहरू जाने सम्भावना अब छ कि छैन ?
लामो समयदेखि एमालेभित्र कतिपय प्राविधिक पक्षहरूमा पनि आ–आफ्ना मान्यता र अडानहरू कायमै रहे । आपसी मतभेद, अविश्वासका व्यवहारिक पक्षले पनि अन्तरविरोधलाई मद्दत गर्‍यो । यस्तो अवस्थामा ती सबै कुराहरूको हल विधिद्वारा नै खोज्नुपर्दथ्यो । फेरि पनि देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्ने सन्दर्भमा सर्वसम्मत रुपमा कार्यादलले सिफारिस गरेको १० बुँदामै टेकेर समाधान खोज्न पर्दथ्यो । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामीले सम्पूर्ण हिसाबले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सकेनौं । केही साथीहरू फरक ढंगले अघि बढ्नुभएको छ । फेरि पनि उहाँहरूलाई हामीले अनुरोध गरेका छौं । १० बुँदेमा टेकेर अब सिंगो पार्टी नै एकताबद्ध हुनेछ भन्ने विश्वासकासाथ हामीले निर्णय गरेका छौं ।
अब केपी ओली अध्यक्ष रहेको एमालेमै रहेर महाधिवेशनसम्म तपाईंहरू सँगै जानुहुन्छ ?
लामो समयदेखि हामी पार्टी निर्माणमा लाग्दै आएका छौं । एमालेको जीवनमा यस्ता उतारचढाव विगतमा पनि देखापर्दै आएका छन् । यसपटकका समस्याहरू गम्भीर रुपमा देखा परे । फेरि पनि समस्या आउनासाथ पार्टीभित्रै समाधान गर्ने पहल हुनेछ । हामीले जे अडान राखेका थियौं, त्यसमा रहेर फरक दल गठन गर्नुपर्ने राजनीतिक सैद्धान्तिक, वैचारिक र व्यावहारिक हिसाबले औचित्यपूर्ण थिएन । त्यसैले हामी पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नेतर्फ लाग्यौं ।
तपाईंहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कदमलाई प्रतिगमन भन्दै आउनु भएको थियो ? के अब त्यो प्रतिगमन पूरै सच्चिएको हो ?
पार्टीभित्र देखापरेका समस्या वा सरकारका समस्यामा पनि प्रवृत्ति के थिए, ती समस्याहरूको यथोचित समयमा समीक्षा गर्नेछौं । अहिले हामीले समीक्षा गरेनौं । यो तातो अवस्थामा समीक्षा परिणाममुखी नहुनसक्छ । हामीले पहिला पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नेछौं । पार्टीपंक्तिलाई क्रियाशील बनाउनेछौं । कहाँ कमी रहेका छन् ती कमी नरहुन् भन्ने सन्दर्भमा समीक्षा गर्नेछौ र चाँडै एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौं ।
लोसपा का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो महतोको फेसबुक ह्याक!
भगवाननगर टांडीमा करिब ५ करोडको लागतमा बन्ने भयो खानेपानी टंकी, मन्त्री शर्माले गरे शिलान्यास
पल शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन जिल्ला अदालत तनहुँको आदेश
देशभरका यातायात कार्यालयको सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द
एमाले प्रवेश गर्दै वीरगञ्जका मेयर सरावगी
काउन्टर महाभियोग’ को तयारी : एमालेले थाल्यो हस्ताक्षर सङ्कलन